Job 42 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
42 Job wee zaa Jehova, sị: 2 “Amatawo m na i nwere ike ime ihe niile,+Ọ dịghịkwa ihe ọ bụla i zubere nke ị na-apụghị ime.+ 3 Ị sịrị, ‘Ònye bụ onye a na-amaghị ihe nke na-ekpuchi ihe e zubeworo?’+N’ihi ya, m kwuru okwu, ma aghọtaghị mIhe ndị karịrị m ịghọta, bụ́ ihe m na-amaghị.+ 4 Ị sịrị, ‘Biko, gee ntị, mụ onwe m ga-ekwukwa okwu.M ga-ajụ gị ajụjụ, gị onwe gị azaakwa m.’+ 5 Ọ bụ n’akụkọ ka m nụrụ banyere gị,Ma ugbu a, anya m na-ahụ gị. 6 Ọ bụ ya mere m ji sị na ekwukwaghị m ihe m kwuru,Echegharịwo+ m n’ájá na ntụ.” 7 O wee ruo na mgbe Jehova gwasịrị Job okwu ndị a, Jehova gwara Elifaz onye Timan, sị:“M na-eweso gị na ndị enyi gị abụọ iwe dị ọkụ,+ n’ihi na unu ekwughị ihe bụ́ eziokwu banyere m+ dị ka ohu m bụ́ Job kwuru. 8 Ugbu a, werenụ oké ehi asaa na ebule asaa+ gakwuru ohu m bụ́ Job,+ chụọkwanụ àjà nsure ọkụ maka onwe unu; ohu m bụ́ Job ga-ekpere unu ekpere.+ Ọ bụ naanị ekpere ya ka m ga-anabata ka m wee ghara imenye unu ihere n’ihi nzuzu unu, n’ihi na unu ekwughị ihe bụ́ eziokwu banyere m dị ka ohu m bụ́ Job kwuru.”+ 9 Ya mere, Elifaz onye Timan na Bildad onye si n’agbụrụ Shua na Zofa onye Neama gara mee nnọọ dị ka Jehova gwara ha; Jehova wee nabata ekpere Job. 10 Jehova wee gbanwee ọnọdụ Job, nke ọ nọ na ya dị ka onye a dọọrọ n’agha,+ mgbe o kpere ekpere maka ndị enyi ya.+ Jehova wee nyeghachi Job ihe niile o nwere, okpukpu abụọ.+ 11 Ụmụnne ya ndị ikom niile na ụmụnne ya ndị inyom niile na ndị niile maara ya na mbụ+ wee na-abịakwute ya, ha na ya wee na-eri ihe+ n’ụlọ ya, ha na-asịkwa ya ndo, na-akasikwa ya obi n’ihi ọdachi dum Jehova kwere ka ọ dakwasị ya; onye ọ bụla n’ime ha wee nye ya otu mkpụrụ ego, onye nke ọ bụla nyekwara ya otu ọla e ji ọlaedo mee. 12 Jehova wee gọzie+ ikpeazụ Job karịa mmalite ya,+ o wee nwee atụrụ dị puku iri na anọ na kamel dị puku isii na puku ehi abụọ e jikọrọ abụọ abụọ nakwa otu puku nne ịnyịnya ibu. 13 O wee nweekwa ụmụ ndị ikom asaa na ụmụ ndị inyom atọ.+ 14 O wee gụọ nke mbụ Jemaịma, gụọ nke abụọ Kezaya, gụọkwa nke atọ Kerin-hapọk. 15 Ọ dịghịkwa ụmụ nwaanyị mara mma dị ka ụmụ ndị inyom Job n’ala ahụ dum. Nna ha wee nye ha ihe nketa n’etiti ụmụnne ha ndị ikom.+ 16 Mgbe nke a gasịrị, Job dịrị ndụ ruo otu narị afọ na iri anọ,+ wee hụ ụmụ ya na ụmụ ụmụ ya,+ ọgbọ anọ. 17 Job wee nwụọ mgbe o mere agadi, ụbọchị ndụ ya jukwara ya afọ.+